FBC - Haala yeroo ilaalchisee barreefffama ibsa ejjannoo mootummaa naannoo Oromiyaarraa laatame( guutuusaa)
Kibxata Guraandhala 14 2009 E.C. - Tuesday, February 21 2017 G.C.
Adaamatti kutaan bulchiinsaa hojiirra oolufi
Pireezdaant Baaroow sirreeffamtootni 171 akka gadhiifaman ajajan
Obbo Malaakuu Fantaafaa galmee itti himataman tokko irratti akka falman manni-murtii murtoo dabarse
Qophiiwwan dargaggootaaf carraa hojii uumuu dandeessisan xumuramaa jiru
Sudaan Kibbaa deeggarsa gaafatte
Finfinnee, Fulbaana 20,2009(FBC) - Haala yeroo ilaalchisee barreefffama ibsa ejjannoo mootummaa naannoo oromiyaa balballoomsu.
туристический онлайн-справочникЛучшие Андроид планшеты	“Sirni Irreechaa aadaa boonsaa hawwata turiizmii addunyaa akka ta’uuf gaheen ummatichaa olaanaadha”
Ummatni Oromoo eenyumaa sabummaa, aadaa, afaaniifi seenaa isaa kabachiisu dhaaf qabsoo bara dheeraa taasiseen wareegamni kanfalaa ture olaanaadha. Mirga Sirna dimokraatawaa walqixxummaafi heddummina kabaju ijaarrachuu dhaaf qabsoon hadhaawaa gaggeesseera. Ummatni Oromoo qabsoo ofiisaafi sabaaf sabalammoota biyyattii walitti hidhuudhaan sirni gita bittaa barbadaa’ee mirgi eenyummaa sabummaa saba Oromoo erga kabajamee ummanni abbaa aadaa, afaaniifi seenaa isaa ta’ee misooma naanichaa irraa akka fayyadamu taasiseera. Sirna federaalawaa walqixxummaan aadaa, amantiifi sabootaa itti mirkanaa’e hirmannaa lammiilee biyya keenyatiin eega dhugoomee asitti ummatni naannoo keenyaa duudhaalee isaa kunuunsaa haaromsa biyyasaa itti fufsiisudhaaf tumsa olaanaa taasisaa jira. Aadaa boonsaa ummatni keenya sadarkaa addunyaatti ittiin beekamu keessaa sirni kabaja ayyaana irreecha birraa isa tokkodha. Ayyaanni Irreechaa bara kanaa Hora arsadeetti kabajamu ummata miiliyoon heduutti lakkaa’amu akka irratti hiraatu eegama.
Qaama sirna Gadaa kan ta’e ayyaanni Irreechaa karaa qindoominaafi hoo’ina qabuun kabajamuun isaa bu’aa mirga abbaa biyyummaa ummata keenyaati. Ummatni Oromoo aadaa Boonsaa addunyaadhaaf badhaase sirna gadaa keessatti Irreechi qaama sirna galateeffannaa tokko ta’ee hawwannaa saboota sablammootaafi ummattoota biyya keenyaa akkasumas turiistotni idil addunyaafi dhalattooni Itoophiyaa biyya alaa jiraatan karaa miidhagina qabuun itti hirmaataa turaniiru. Sirna kabaja ayyaana irreechaa sadarkaa har’a irra gahe kanaan dagaagina akka qabaatuuf hirmaannaan ummata naannichaafi mootummaa bakka olaanaa akka qabus mirkanaa’aa dhufeera.
Ayyaana Irreechaa Hora Arsadee fi iddoowwan biroo naannicha keessatti bara 2009 akkuma bara baraan ummatni naannoo keenyaas ta’e idil addunyaarraa walitti bahee ayyaaneffachaa ture sirna hoo’adhaan akka kabajamu eegama. Ayyaanni kun haala kanaan kabajamuun isaa fedhii ummatni naannoo keenyaa biyyasaarratti karaa nagaaa, tasgabbiifi misoomasaa saffisiisun jiraachuuf barbaadu calaqqisiisuuf gargaara.
Ayyaani irreechaa ayyaana aadaan keenya sadarkaa olaanaatti irratti miidhageefi hawwatee mul’atuufi kabajamu taasisuun galmee sirni Gadaa UNSCOtti galmaa’uuf deemuuf haala mijaawaa uumu ta’ee akka xumuramuu qaamoleen hundi gahee isaanirraa eegamu bahuu qaban. Mootummaan fedhii aadaan ummata naannoo keenyaa addunyaarratti beekamtii guutuu akka argatuuf qaburraa ka’uudhaan roga hundaan miidhaginaan ayyaaneffamuu sirna irreechaaf tumsi taasisu olaanaa ta’a.
Ummanni Oromoo abbaan aadichaafi sabaafi sablammootni biroo akkasumas turistootni biyya alaa iddoo gara garaa irraa ayyaanicha kana irratti hirmaachudhaaf dhufan fi lakkoofsi isaanii milliyoonotaan tilmaamamu karaa tasgabbii qabuu , hawwataa tahee fi karaa nagahaatiin ayyaanicha irratti hirmaatanii akka galan qaamnii hundiunuu amantaan fi siyaasaan osoo wal hinqodiin gahee isarraa egamuu bahachuutu irraa egama. Hunda caalaa nageenya amansiisaafi maqaa gaarii aadaa ummata oromoo roga gaaridhaan ijaaruu keessatti qoodni naannoon keenya qabus murteessaa akka ta’e hubatamuu qaba.
Kana malees Iddoon kabaja ayyaana irreechaa lafa qaamoleen siyaasaa gara garaa ergama siyaasaa isaanii itti dabarfataniifi itti gaggeeffatan osoo hin taanne lafa aadaan Oromoo qofti itti gaggeeffamuu fi hawwata tuuristii miidhagaa fi hawwataa tahee argamu waan ta’eef humnootni siyaasaa garaagaraa bakka ajandaasaanii itti tarkaanfachiifatan akka hintaane ofeeggannoo taasifamuuf ummatni naannoo keenyaa akkuma kanaan duraa tumsa olaanaa gochuun irraa eegama.
Ayyaana Irreechaa sadarkaa har’a beekamtii olaanaa argate kanarraan gahuudhaaf sosochii mootummaafi ummatni taasisaa turan hunda caalaa imala haaromsa keeyaa kan saffisiisu, waldhaansoo hiyyummaa waliin qabanne moo’achuu keessatti hiikoo aadaan boonsaan keenya qabu kan mirkaneessu waan ta’eef qaamoleen dhimmichi ilaallatu hundi xiyyeeffannaa olaanadhaan tumsa akka taasisan amantaan mootummaan qabu olaanaa dha.
Ayyaana Irreechaa baranaa sagantaawwaan garaagaraatiin miidhaksuudhaaf qophiin garaa garaa qaamolee ayyaanicha qopheessaniin taasifamaa tureera. Kanneen keessaas fiigichi guddaan daa’imman naannoo keenyaafi atleetotnii biyya kessaa fi addunyaa baayy’een irratti hirmaatan guyyoota lamaaf gaggefamera Fiigicha daa’imman naannoo oromiyaa guddaa kanaanis daa’imman aadaa, safuufi duudhaalee Oromoo kabajuudhaan akka guddataniifi, aadaa naannoo isaanii keessatti qooda qaban gahumsaan akka bahatan kan dandeesisu waan ta’eef mootummaa sagantichaaf dinqisiifannaa olaanaa qaba.
Fiigicha atleetonni biyya kessaa fi addunyaa mararraaa itti hirmaatanis magaalaa harra gaggefames maqaa gaarii dirree fiigichaatti naannoon keenya qabdu daran olkaasudhaan, sirna Irreechaa keenya faanaa walitti dhufeenya aadaafi ispoortiin qaban daran cimsuudhaan addunyatti akka mulatuu taasiisuu bira darbee jaallattoota isportii adunyaa birattis adaan irechaa carraa kanaan caalaattii akka beekamuu taasisuu kessattii faayidaa olaanaa qaba. Irreecha sagantaawwan garaagaraatiin miidhagsinee kabajuun keenya guddina hawaas diinagdee nananoofi biyya keenyatiif gumaacha aadaan keenya taasisuu danda’u daran kan agarsiisu waa ta’eef jajjaabaatee itti fufuu qaba.,
Waan ta’eefis ummatni naannoo keenyaa kabaja sirna Irreechaan walqabatee ijji addunyaa guutuun gara keenya akka ta’uufi hawwata guddaa ta’ee galmaahuu sirna Irreechatiif harka walqabannee dhaabachuun nurraa eegama.
Finfinnee	Oduuwwan Biroo
« Ibsa haala yeroo irratti ejjannoo mootummaa naannoo Oromiyaa balballoomsu	Kunuunsa qabeenya uumamaa fi misooma sululaaf qophiin taasifameera »
анализ сайтовseo оптимизация сайта	Read 4610 times	Hammentaa barreeffamaa
Haarawaa... Sagantaan ekisteenshinii fayyaa dhaloota 2ffaa qophaa’e
Ardii 8ffaan argamuun himame
Qiddus Giyoorgis Chaampiyans Liigicha marsaa itti-aanutti darbeera
Oduuwwan Guraandhala 05 2009.
Oduu Dilbata Ganamaa Guraandhalaa 05 2009.
Oduuwwan Guraandhala 4 2009.
Oduu sanbata duraa Ganamaa Guraandhala 04 2009.